ट्राफिक जनचेतनामुलक गीत : रातो बत्तीमा रोकिने, हरियोमा हिड्ने
काठमाडौँ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी व्यवस्थालाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित एव प्रभावकारी बनाउनको लागि विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । ट्राफिक महाशाखाले गीत संगीतको माध्यमबाट ट्राफिक नियम सिकाउँदै आएको छ । यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन ट्राफिक प्रहरीले नृत्य
नयाँ युट्युव च्यानल कसरी बनाउने
कोरोना भाईरसको आतंक छ, घर मै बन्धक भएका बेला गीत संगीत सुन्नुस, हेर्नुस
कमला घिमिरेकाे पहिलाे गित “चिया छानेको” युटुवकाे ट्रेंडिंग नं. १ मा - भिडियो
युटुबमा सर्बाधिक रुचाएकी कमला घिमिरेले आवाज दिएको पहिलो गीत उत्कृष्टको सूचिमा १ नम्वरमा आएको छ । सानै उमेरमा उनले गाएको गीतले लाखौ दर्शक नजिकिएका थिए।१ करोड भन्दा बढीले दोहोरीने हेरिसकेका छन कमला घिमिरेको।कमला घिमिरेको उक्त गीतको प्रस्तुतकर्ता भने शम्भु कुँवर हुन्। चर्चित सर्जक रमेश बिजिको शब्द
Rabi Lamichhane धरौटीमा रिहा भए ! देश बिदेशमा खुशीको लहर
काठमाडौँ । पत्रकार शालिकराम पुडासैनी मृत्यु प्रकरणमा अनुसन्धानको लागि भन्दै पक्राउ परेका टेलिभिजनकर्मी रवि लामिछाने धरौटीमा रिहा भएका छन् । जिल्ला अदालत चितवनका न्यायधीश हेमन्त रावलको इजलासले लामिछानेलाई पनि ५ लाख तारेखमा धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । यस्तै युवराज कँडेल ३ लाख र अस्मिता कार्की
रबि लामिछाने रिहा, हजारौ समर्थकको हाई हाई, हिरासतमा रहदा के के भयो ?
गर्भ नबसेर हैरान हुनुहुन्छ ? १ महिनामै गर्भधारण गर्ने घरेलु औसधि (भिडियो सहित)
२०७६ सालकाे बार्षीक राशीफल, कसरी हुन्छ याे बर्ष भाग्याेदय!!
२०७६ मा तपाईको भाग्य कस्तो ! नयाँ वर्षको वार्षिक राशिफल थाहा पाउनुहोस्
डा. सुरेन्द्र केसीको यस्तो खुलासा , संम्बिधान संशोधन गरेर कार्यकारी राष्टपति मलाई बनाउदैछन्
समृद्ध नेपालका लागि डा. सुरेन्द्र केसीको खरो विश्लेषण , संम्बिधान संशोधन गर्नुपर्दछ, कार्यकारी राष्टपति मलाई बनाउनुपर्दछ Dr. Surendra KC is one of the most popular political analyst of Nepal and he has been sharing his analysis upon the recent political scenario of Nepal.
Live Video टुडिखेलमा : प्यारासुटबाट सैनिक जवान सिधै जमिनमा यसरी खसेका थिए
हरेक वर्ष शिवरात्रिको दिन नेपाली सेनाले विविध कार्यक्रम गरेर सेना दिवस मनाउने गरेको छ । सोहि कार्यक्रममा प्यारासुट नखुलेपछि सेनाका पूर्णबहादुर भण्डारी अनियन्त्रित भएर सिधै आकाशबाट काठमाडौँ मल नजिकै फुटपाथमा खसेका थिए। प्राविधिक कारणले सही अवस्थाले ल्याण्ड हुन नसकेको सैनिक श्रोतले बताएको छ ।
कुल पोष्ट : 120